Ọzụzụ Ntaneti nke Nkụzi Mberede Mberede
Na June 25, 2021, Slọ ọrụ SIBO duziri ọzụzụ ndị ọkachamara n'ịgbapụta ngwa ngwa n'ịntanetị maka ndị ọrụ niile. N'ime ọzụzụ a, ndị ọrụ nke SIBO mụtara ụfọdụ ikike nnapụta mberede na tiori site na ịlele vidiyo ọnụ. N'otu aka, a na-atụ anya na ndị ọrụ nwere ike ichebe onwe ha n'ọrụ. N'aka nke ọzọ, nke a bụkwa ụzọ dị mkpa iji hụ na nchekwa SIBO adịghị mma.
N'ehihie nke June 25th, ndị ọrụ nke SIBO gbakọtara ọrụ ha, onye ọrụ ọ bụla tinyere onwe ya n'ịmụta ihe ọmụma nlekọta mberede. Oge a, site na ihe eji eme ihe, a na-akọwa ihe ọmụma na nka nke ịgbanye mgbapụta ọkụ eletrik na iweghachi obi, usoro ọgwụgwọ ahụike maka ihe mere, wdg. A kọwakwara ọnọdụ nnapụta ziri ezi, ụkpụrụ nnapụta, na usoro mberede na ọnọdụ mberede.
IBlọ ọrụ SIBO nwere olile anya na onye ọrụ ọ bụla nwere ike iji ọzụzụ a kpọrọ ihe. Site na nkuzi a, ndị na-azụ ọzụzụ ga-enwerịrị nghọta siri ike banyere ihe ọmụma na nka enyemaka mbụ iji chebe nchekwa nke ha nke ọma ma kwalite mmepụta nchekwa n'ọdịnihu. Ọ na-atụ anya ịkwalite nchedo onwe na ikike mgbapụ nke onye ọ bụla na-arụ ọrụ, iji mepụta nnapụta na nnapụta na mberede ma ọ bụrụ na ihe ọghọm, iji belata nhụjuanya nke ndị merụrụ ahụ, na ịlụ ọgụ maka oge ọgwụgwọ, si otú a na-ebelata nsogbu nkwarụ, na-ebelata ọnụọgụ ọnwụ, na ichebe ndị ọrụ ruo n'ókè kacha ukwuu. Ndụ na ahụike.
Site na ọzụzụ a, onye ọrụ ọ bụla nke SIBO amatala ụfọdụ enyemaka mbụ. N'ime ọrụ na ndụ n'ọdịnihu, ndị ọrụ SIBO nwere ike iji ihe ọmụma na nkà mmụta mbụ metụtara enyemaka iji napụta onwe ha na nnapụta. Na usoro ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na-abawanye ọzụzụ nnapụta nnapụta, meziwanye enyemaka onwe onye na ikike nnapụta nke ndị ọrụ, ma mepụta ọnọdụ ọrụ na nchekwa. N'otu oge ahụ, anyị ga-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa ka mma na ebe ọrụ nchekwa.
Post oge: Jul-08-2021